4 siyaabood oo ay u gudbiyaan music ka iPhone in iPod
Music Transfer iibsaday ka Lugood Store ka iPhone in iPod isticmaalaya Lugood
Music Transfer iibsaday ka Lugood Store ka iPhone in iPod isticmaalaya Lugood kulan
Music Transfer laga keeno ka CD ama il kale oo ka iPhone in iPod
Hab fudud oo awood leh in ay ka iPhone wareejiyo music in computer
Xaaladdan oo kale, aad soo iibsatay music ka Lugood iyo rabto in ay ku wareejin ka iPhone in iPod, jid lahayn si toos ah geeddi-socodka. Waayo, in la sameeyo, waxaad u baahan tahay dib-u-soo bixi hore iibsadaan Lugood Store on your computer. Waxa ugu wanaagsan ee this in la sameeyo, waa in kharashka dheeraadka ah ma loo baahan yahay in la sameeyo ilaa wakhtiga, ID la mid ah waxaa loo isticmaalaa in isla ujeeddadaas.
Markaasay aad u baahan tahay in la raaco talaabooyinka soo socda ee habka la doonayo in la sameeyo. Kombiyuutarka, in Lugood, u tag Lugood dukaanka. Markaas waxaad u baahan tahay inaad ku dhufo "iibsaday ', oo laga heli karo in ka Quick Links oo ku saabsan Home shaashadda. Markaasay aad u baahan tahay in la helo heesaha ku jira iPhone, laakiin ma maktabadda Lugood your computer ee. Markaas, Riix badhanka 'daruur' ee soo socota si ay magaca heesta si ay u soo bixi. Tallaabada ugu dambeeyey ee syncing weli la samayn karaa sida la doonayo. Just u hagaagsan kuwa heesaha maktabadda Lugood aad si aad iPod sida la doonayo oo aad samaysay shaqada of Music Transfer gatay dukaanka Lugood ka iPhone in iPod.
Kulan Lugood waa hab kale si ay u socodka ah ee suuqa kala iibsiga ee music iibsaday ama unpurchased ka Lugood ka iPhone in ipod. Dhab ahaantii, Lugood ciyaarta ayaa go'aamisa song, taas oo ku sugan iCloud iyo tan iyo waxaa jira in ka badan 43 milyan oo songs, Lugood kulan kulan kuwaas songs unpurchased la database ah oo kuu ogolaanaya dukaanka iCloud ka ciyaaro music kuwan. Hadda, kaliya aad u baahan tahay in aad tubbada iCloud button download inay muusikada ka ah artist, album ama playlist. Sidaas darteed, qof ayaa heli deg ah loo maktabad music weyn oo aan ka walwalayn intii lagu kaydiyo qalabka aad.
Wixii habkan si ay u dhamaystiraan, aad u baahan tahay si ay u dajiyaan oo dhan qaab heesaha CD in Lugood ee hore. Halkan waa habka loo kala iibsiga dhamaystiran oo Music ka CD iyo ilo kale.
Fur Lugood iyo geliso CD ah in aad rabto in aad soo dhoofsadaan galay drive disc ah
Fursadaha muuqdo inuu soo dumaya. Haddii aad rabto in aad soo dhoofsadaan song kasta disc ah, dooro haa guji No , in haddii aad rabto in aad music gaar ah si ay u dajiyaan.
Xaaladdan oo kale, waxaad riixi on 'MAYA', Dooro menu dhinaca top-bidix ee suuqa kala Lugood iyo dooro CD maqal ah oo liiska ku jirta.
Markaas, hubi faylasha aad rabto inaad ka soo dhoofsadaan in Lugood, ka dibna dooro Import CD .
Doorashada doorbidida muuqataa oo aad u baahan tahay in ay doortaan doorashaada leh iyo riix OK ka dib doorashada ayaa la sameeyey.
Xaaladdan oo kale, maktabadda music mar hore ku jira kuwan raadkaygay ka album, kaas oo aad soo degida, waxaad heli doontaa degdeg ah si ay u overwrite daaqad. Waxaad dooran kartaa mid ka mid jira beddel ama ha beddel sida aad u doonayo.
Markaas in aad sugto ilaa music la dooxay si maktabadda Lugood.
Sida ugu dhakhsaha badan dejinteeda dhamaato, ku soo lifaaq qalab si aad u computer ah.
Waxaad hadda jiidi karaan album ilaa dhankiisa midig ee suuqa kala Lugood halkaas oo ay leeg- ah ka muuqan doona oo ka kooban music ku saabsan qalab aad. Hoos xaq aad iPod ama qalab kale.
All soo haray waa in tuurid iPod ah oo wuxuu ku raaxaysan aad music
Qalab weyn oo loogu ujeedada kala iibsiga fudud oo muusiko ah ka iPhone in computer waa Wondershare TunesGo. Wuxu u adeegaa saaxiibka fiican ee Lugood iyo Maamul karo, soo saarid iyo TunesGo wadaagaan music. Wonderhsare TunesGo ka dhigaysa nolosha u fududahay dadka raadinaya dhowr xarumo la xiriira music aad iPhone iyo iPad. Dhab ahaantii, waa hab habboon in dhibaatooyin ka dhan iyo xallin karo dhibaatooyinka la xiriira suuqa kala iibsiga ee music.
Maxaad u dooratay TunesGo Wondershare
Waxaa jira dhowr sababood oo doorashada Wondershare TunesGo for. Waxaa ka mid ah sababo badan oo tiro badan, qaar ka mid ah sida soo socota:
a. Bedelka aad Music si xor ah u dhexeeya aad Device macruufka iyo Lugood
b. Nidaameed iyo wareejiyo maktabadda Lugood si aad u qalab Android si fudud
c. Download ama record music for website music galay aad Lugood maktabadda
d. Nadiifi aad Dhan Music Library
e. Maamul Music iyada oo aan xayiraado Lugood
Sida loo isticmaalo TunesGo Wondershare
Tan, Wondershare TunesGo taageeri kartaa qaababka kala duwan oo u adeegta goobaha kala duwan; socodka ah ee suuqa kala iibsiga ee music ka Lugood in qalab waxaa halkan kula macaamilooday in this article.
Riix Music Transfer ee bogga default guriga, ka gala bogga Music Transfer mar qalabka ku xiran;
Riix Import, dooran ' Import ka Lugood '
Dooro playlists aad rabto in lagu wareejiyo ka Lugood in qalab, riix OK.
Lugood kale oo aad la Siiyay
Waxaa jira qaar ka mid ah Lugood kale oo dadka isticmaala ku raadinaya wax cusub oo ka duwan. Wondershare TunesGo waa mid ka mid ah oo dhab ahaantii, mid ka mid ah oo magac weyn ujeeddo oo isku mid. Tani TunesGo Wondershare uu leeyahay muuqaalada dhowr ah sida Transfer kombiyuutar kasta si iDevice kasta, Support Songs oo Videos in 30+ qaabab kala duwan, Laba hab .Wadashaqayntaas iyo qaar badan.
Ujeedada doorashada xal kale Lugood, ganacsiga a article cajiib ah oo sharxaya oo taasuna waa http://www.wondershare.com/itunes/free-alternatives-to-itunes.html . Tani waxay fasireysaa oo dhan dhufto ee kala duwan oo muhiim ah oo cajiib ah, taas oo u adeegta ujeedada Lugood iyo karti uu u leeyahay in ka badan fududahay in la isticmaalo. Waxaad ka heli kartaa magacyada dhowr ah sida Manager Copytrans, syncios, PodTrans, Maqaalkani waxa kale oo keentaa iftiinka qaar ka mid ah magacyada weyn oo ujeedada Music Ciyaar la yareeyo. Magacyada weyn iyaga ka mid ah waa Foober, Ecoute, MediaMonkey, Fidelia iyo Musicbee.
Content ayaa sidoo kale sharxayaa qaar ka mid ah qodobada ka muhiimsan oo waa hab la yaab leh si ay u helaan wax cusub oo ka duwan in Misbaax ku. Xaaladdan oo kale, aad raadineyso macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan mawduucyo la xiriira Lugood iyo kale, link sare ku xusan, iman karo sida isticmaalka weyn.
Dr.Fone U iPhone: ka iPhone Ladnaansho tirtiray Data
Sidee si ay u gudbiyaan SMS, Xiriirada iyo More ka Motorola si iPhone
Sida loo isticmaalo One Computer si wadaag Music in Multiple iPhone, iPad, iPod iyo
iPhone kaabta shawladda: Waraaqda ceshan iPhone Data
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone in Computer New
> Resource > iPhone > 4 siyaabo si ay u gudbiyaan music ka iPhone in iPod